Shandong Hengrong Impahla Imikhiqizo Co., Ltd. yinkampani enkulu ehlanganisa ukukhiqizwa, ukuthuthukiswa kanye nokumaketha futhi igxile ekukhiqizeni imikhiqizo emikhulu njengezikhwama ze-FIBC, isikhwama eselukiwe, izikhwama ze-Bopp, izikhwama ze-mesh, izikhwama zephepha ezilukiwe kanye nokhula wokhula ezisetshenziswa kakhulu ezimbonini, amaminerali nezolimo izimboni, ukufakwa kwemikhiqizo, ukuthuthwa, indawo yokugcina impahla kanye nokufakwa kwempahla.
Inkampani yethu ifaka imishini namasu asezingeni eliphezulu ekhaya nakwamanye amazwe futhi yonke imikhiqizo yenziwa kusuka ku-100% wezinto ezisezintombini. Imishini yethu yokudweba ngocingo ingaveza izintambo ezinemibala ehlukahlukene futhi ezijiyile ngamandla aphezulu, impahla esetshenzisiwe yokwelulwa, ukumelana okuhle kwe-UV ne-oxidation, okungahlangabezana nokufunwa kumakhasimende ngokusetshenziswa okuphindiwe.
Imishini yokweluka ingakhiqiza indwangu ebanzi engu-25-500cm enendawo eyisicaba, isicwebezelisi esiphezulu, amandla aqine kakhulu nempilo ende, enganciphisa kakhulu izindleko zokusebenza nezomsebenzi zamakhasimende. Uhlome ngamasu athuthukile, imishini yokumboza ingaveza indwangu eboshwe iqinile futhi ihlala isikhathi eside, enokuphila okude kwensizakalo nemiphumela emihle yothuli / emanzi. Uhlome ngamasu amahle kakhulu, imishini yokuthunga ingaveza uhlobo lwe-tubular i-FIBC, u-U hlobo lwe-FIBC, izikhwama ezixakile, izikhwama ezinomoya, nezikhwama zomumo ezingajwayelekile, izikhwama ze-leno mesh, zonke ezibonakala ngokwakhiwa okufanele, ukubukeka okukhangayo nokusebenza kwezindleko eziphezulu. Ngokwazi ukusebenzisa umkhiqizo omkhulu, inkampani yethu ingaletha ngokushesha imikhiqizo ngokususelwa ekuxhumaneni okuseduze phakathi kwezinqubo kusuka ekutholeni i-oda kuye ekulethweni.
Sisungule uhlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi okufanele kulawulwe kuyo ngokuqinile izinga nokuhlolwa kunqubo ngayinye yayo yonke imikhiqizo kusukela ekufakweni kwezinto kuze kuthunyelwe imikhiqizo eqediwe, futhi 100% yemikhiqizo eseqedile kufanele ihlolwe futhi ihlanzwe ukuqinisekisa ihlanzekile, ibukeka kahle.
Ngethimba lokwakha lobuchwepheshe, singanikeza ngezixazululo ezahlukahlukene ezisebenzayo neziphrinta ngokuhambisana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene, futhi sinikeze izinhlobo ezingaphezu kwezinkulungwane zemiklamo yamakhasimende ethu avela eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, e-Australia, e-Europe nase-Asia. Idizayinwe kahle futhi ikhiqizwa kahle, imikhiqizo yethu yehlise kakhulu izindleko zokuthengwa kwamakhasimende ethu, futhi yaziwa kakhulu ngamakhasimende ethu avela kuwo wonke umhlaba.
Ngamaphethini wokuhweba aguquguqukayo futhi ahlukahlukene, inkampani yethu inganikeza ngezinsizakalo ze-ODM ne-OEM. Samukela ngenhliziyo yonke amaklayenti amadala namasha emhlabeni jikelele enkampanini yethu ngokuxoxisana ngebhizinisi nokubambisana. Futhi, sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuhlinzeka ngalinye lamakhasimende ethu ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme!